सावधान ! यी चीजहरूलाई बेवास्ता गरे हुन्छ अक्सिजनको कमी। – hamrosandesh.com
सावधान ! यी चीजहरूलाई बेवास्ता गरे हुन्छ अक्सिजनको कमी।
विज्ञहरूका अनुसार, घरमै केही सावधानी अपनाउदाँ पनि अक्सिजन कम हुनबाट बच्न सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले तपाईंले अक्सिजन लेवल परीक्षणका निम्ति अक्सोमिटर घरमा राख्नुहोस् । औषधी पसलहरूमा यो सहजै उपलब्ध हुन्छ ।
शरीरमा अक्सिजनको कमी भएमा आफ्नो घरमा पनि ग्यास स्टोभ, मैनबत्ती, विजुली वा ग्यास हिटर जस्ता वस्तुहरूबाट कम्तिमा पनि ५ फिट टाढा रहनुहोस् । यी चीजहरूको नजिक जाँदा थप अक्सिजनको अभाव हुने हुन जान्छ ।
तपाईं धुम्रपान गर्नुहुन्छ भने यसलाई कम गर्नुहोस् । धुम्रपान गर्ने मानिसहरूबाट टाढै रहनुहोस् । यती मात्र हैन, घरमा पूजाका लागि प्रयोग हुने अगरबत्ती वा धूपबत्तीको धुवाँबाट पनि टाढै रहनुहोस् । यस्तै घरमा इन्डोर प्लान्ट लगाउनुहोस् ,यसबाट सधै अक्सिजन पाइन्छ ।